ကလေးများနဲ့ ခါးဆစ်ရိုးအရည်ကြည်ဖောက်ခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ခါးဆစ်ရိုးအရည်ကြည် ဖောက်တယ်ဆိုတာဟာ ကလေးရဲ့ ခါးဆစ်အောက်ပိုင်းကနေ အပ်နဲ့ဖောက်ပြီး ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောမကြီးကို ကာရံထားတဲ့ အရည်ကြည်ကို ထုတ်ယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို ဘေးတစ်စောင်း ငြိမ်ငြိမ်နေစေပြီး ခါးအောက်ပိုင်း အရိုးဆစ်ကြားကနေ အရည်ကြည်ကို စုပ်ယူတာပါ။ အာရုံကြောမကြီးကို မထိပါဘူး။
>> ဘာကြောင့် ခါးဆစ်ရိုးအရည်ကြည်ဖောက်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ?
ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောမကြီး ဘေးပတ်လည်ကအရည်ကို စစ်ဆေးတာပါ။ ကလေးမှာ ဦးနှောက်အမြှေးပါး ရောင်ရမ်းတာ ရှိ၊ မရှိ သိချင်လို့ စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေ ဖျားတဲ့အခါ၊ အထူးသဖြင့် အသက် ၁ လအောက် ကလေးတွေ ဖျားတဲ့အခါ စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်နေတာကို စောစောစီးစီး သိရှိကုသနိုင်ခြင်းဟာ ကလေး ပြန်လည်ကျန်းမာ နာလန်ထနိုင်ဖို့အတွက် အင်မတန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးရုံတက်ပြီး တခြားစစ်ဆေးမှုတွေ၊ ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
>> ဘယ်လိုဖောက်ယူ စစ်ဆေးလေ့ရှိသလဲ?
ခါးဆစ်ရိုး ဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ကလေးဟာ ဘေးတစ်စောင်း၊ ဒူးကို ရင်ဘတ်နားအထိကွေး၊ ခေါင်းငုံ့ထားရပါမယ်။ ပိုပြီးသိသာထင်ရှားဖို့ ကလေးဟာ ဘောလုံးလေးလို ကွေးထားရပါမယ်။ ကလေးသေးသေးလေးတွေကျတော့ ဒီလိုအနေအထားရအောင် ဘေးက လူတစ်ယောက်က ကွေးပေး၊ ကိုင်ပေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ခါးဆစ်ရိုးတွေကြားထဲကနေ အတွင်းအရည်ရှိတဲ့နေရာအထိကို ဆရာဝန်က အပ်လေး ထိုးသွင်းလိုက်မှာပါ။
ခါးဆစ်ရိုးအရည်ကြည်ဖောက်ခြင်းဟာ အနေရအထိုင်ရခက်ပြီး တစ်ခါတလေ နာကျင်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးသေးသေးလေးတွေဟာ သူတို့ကို အတင်းချုပ်ကိုင်ထားတာကို မကြိုက်လို့ အရမ်းငိုတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုအပ်ထိုးသွင်းတဲ့အခါ မနာမကျင်အောင် ဆေးလိမ်းပေး၊ ထိုးပေးလို့ရတဲ့အပြင် တချို့ကလေးတွေမှာ ပိုငြိမ်အောင် ဆေးပေးလို့ရပါတယ်။
ခါးဆစ်ရိုးအရည်ကြည် စစ်ဆေးတာဟာ ဘာအန္တရာယ်မှမရှိတဲ့ စစ်ဆေးမှုတစ်ခုပါပဲ။ တစ်ခါတလေ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့မရတဲ့အခါ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားရတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အနည်းအကျဉ်းလောက်မှာတော့ ဖောက်ပြီး တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်လောက် ခေါင်းကိုက်တာ၊ ခါးကိုက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးထွက်တာ၊ ပိုးဝင်တာ၊ အာရုံကြောတွေ ထိခိုက်မိတာ စတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေကတော့ အင်မတိအင်မတန် ရှားပါးပါတယ်နော်။
>> အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဘာတွေသတိထားရမလဲ?
ခါးဆစ်ရိုးဖောက်ပြီးနောက် ကလေး ပုံမှန်အတိုင်း ရေချိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖောက်ထားတဲ့နေရာမှာ ပတ်တီးစတို့၊ ပလာစတာတို့ ကပ်ထားရင်လည်း နောက်တစ်ရက်လောက်ဆို ခွာလိုက်လို့ရပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်တာတို့၊ ခါးနာတာတို့ရှိနေရင်လည်း Biogesic for Kids လို paracetamol ပါဝင်တဲ့ ဆေးရည် တိုက်လို့ရပါတယ်။
>> အဓိကအချက်တွေက -
● ခါးဆစ်ရိုးအရည်ကြည်ယူတယ်ဆိုတာဟာ ကလေးရဲ့ခါးအောက်ပိုင်းနားကနေ အရည်ကြည်ကို အပ်နဲ့ထုတ်ယူခြင်းပါ။
● ကလေးမှာ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ သုံးပါတယ်။ တခြားရောဂါ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
● ခါးဆစ်ရိုးအရည်ကြည်ယူတယ်ဆိုတာ စိတ်ချရတဲ့ စစ်ဆေးမှုတစ်ခုပါပဲ။ အာရုံကြောမကြီးကို မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။
၂.၁၂.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ တွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် များသောအားဖြင့် လျစ်လျူရှုမိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းဟာ မိဘများအနေနှင့် လုံးဝလက်သင့်မခံရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ အနိုင်ကျင့်ခံရပြီး ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးများအနေနှင့် လူကြီးဖြစ်တဲ့...
မိခင်ကနေ ရင်သွေးဆီသို့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခြင်း
၂၈.၁၁.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ဦးဟာ ကိုယ်ဝန် ၃၄ ပတ်မှာ ကလေးကို ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကလေးအား မွေးပြီးပြီးချိန်တွင် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် တစ်ပတ်အကြာမှာတော့ မိခင်ပြန်လည်သက်သာပြီဖြစ်လို့ မိခင်နှင့်အတူ ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။